SIDA LOO DOORTO BUDADA BEERTA - BEERTA
Tirada badan ee qalabka loogu talagalay daryeelka dhirta beerta, baashaalku waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee dareenka ah in xitaa dad yar oo xiiseynaya beerta si ay u fahmaan magaca qalabka loogu talagalay waxa loogu talagalay.
Ma taqaanaa? Qaybaha ugu horreeya ee soo muuqday bilawgii qarnigii 19aad waxay la mid yihiin maqas-gooshi iminka ah waxaana loo adeegsaday jarista geedka canabka ah.
Goobta beerta - ballan
Laamiyo caleemaha iyo koritaanka kale ee dhirta, duurka, ubaxyada iyo dhirta beerta sii kordhaya ee beerta waa mid aan suurtagal ahayn iyada oo aan la jarjarin beerta wanaagsan (laga yaabo inaanay ka badnayn hal). Xaaladdan, saxnaanta macneheedu waa faahfaahinta saxda ah ee hawlaha lagu fuliyey ujeedooyinka lagu gaarayo guulaha ay fuliyaan. Si kale loo dhigo, si loo fahmo sida loo doorto jilbaha saxda ah, waxaad u baahan tahay in aad horay u go'aamiso goorta dhabta ah ee laga filayo isticmaalka. Haddii aad si kooban u sharraxdo cawaaqibyadan, waxaad helaysaa sawirka soo socda:
Xeerarka koritaanka dhirta ee horumarka ugu wanaagsan.
Kordhi dhalidda iyo raaxada midhaha la gooyey sababtoo ah qaabka ugu fiican iyo cufnaanta taajka.
Kala saarista caleemaha jiran iyo kuwa jirran oo caqabad ku ah horumarinta geedka.
Kor u qaadida horumarinta iyo koritaanka ugu yar ee caleemaha yar yar.
Abuuritaanka nooc ka mid ah noocyada ugu quruxda badan ee warshadda marka la eego sifooyinka shaqsiyadeed iyo isku dhafka walxaha kale ee beerta.
Jarjirta xididdada iyo jarida gooynta dhalmada.
Noocyada barafka beerta
Noocyada ballaadhan ee beeraha beerta ee maanta la siiyay waxay xoojineysaa jawaabta su'aasha ah sida loo doorto ikhtiyaarka kaliya ee loo baahan yahay. Habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo baakadka beerta waa inuu si taxadar leh u tixgeliyaa soo jeedimaha soo saarayaasha. Kuwani waa:
sheygan caadiga ah oo leh laba sharab, mid ka mid ah oo goynaya midkuna waa mid u adkaysata (aan loo eegin). Habka garsoorka waxaa loogu talagalay inay ka hortagto in laamaha lulmayo inta lagu jiro nidaamka manjooyin. Natiijadu waa nadiif ah, xitaa la gooyey iyo qayb ka mid ah qaybta bidix ee maqaarka. Abaalgudkani wuxuu si fiican u shaqeeyaa laamaha dhalinyarada, dhumucdiisuna aysan ka badnayn 13-20 mm, iyada oo aan loo isticmaalin caleemo waaweyn oo la qalajiyey kuwaas oo mar horeba awooday in ay ku adag tahay;
Jardiinka xayawaanka leh xayawaannada dheer, sida caadiga ah, waa nooc ka mid ah shears laba-blade. Waxay, marka loo eego, waxay u qaybsan yihiin laba qaybood oo hoose. Maqasyada xayiraadda geedaha waxaa loo isticmaalaa haddii dhumucda laanta ay ka sarreyso laba centimitir. Goobaha noocan oo kale ah waxaa lagu qalabeyn karaa farsamoyaqaano farsamo. Maqasyo, oo ah ciribtirka duurka, waxaa loo isticmaalaa dhumucda caleemaha laga bilaabo 1.5 illaa 2 cm, oo aan isku dayin in ay jaraan lafahooda qallalan ama ka badan. Gaar ahaan loogu talagalay dhirta quruxda badan ee dhirta, maryaha maqaarka ayaa lagu sameeyaa daloolin ama qoyan. Haddii hadhaaga wax soo saarka ah ee la moodo, markaas koronto, qadar la'aan, ama shimbiraha ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa ugu badan ee xiiran. Waxa kale oo jira maqasyo badan oo badan oo aan loo isticmaali karin oo kaliya beerta, maadaama ay jarjaraan, xadhkaha, silig iyo ceelal caag ah;
Ma taqaanaa? Ereyga Faransiiska "pruner" waxaa lagu turjumay sida xayawaanka beerta.
Bannaanka u xiisaha leh geed canab ah, geedo waaweyn, caleemaha qalalan iyo adag ee geedaha iyo dhirta waxaa la siiyaa geedo bir ah oo la gooyey oo leh bir yar oo bir ah ama balaastig yar oo leh dusha ololka. Qalitaanku uma oggolaanayo in laamuhu ay gurguuraan marka la jarayo;
Goobta beerta ee xaraashka dheer waxaa si fudud loogu yeeri karaa burburiye, inkastoo tani ma aha doorasho kaliya ee gooyaa laamood aad u dheer, waxaad dhahdaa, dhirta dheer. Lopper xirfad leh waxaa gacanta ku haya laba gacmood, oo leh dhererka gacanta ee gaadhaya ilaa 0.9 m, tani ma noqon karto mid kale. Nadiifinta cutubku waa la damaanad qaadayaa, iyo fududeyn dheeraad ah waa marka abuurista duurka ma jirto baahi loo qabo in laga shaqeeyo jiirada. Marka lagu daro loppers gacanta, waxaa jira xulasho ah in ay ka shaqeeyaan koronto (caanaha iyo batteriga) iyo gaas;
Xayawaanada gaarka ah ee geedi-socodka geedaha ayaa la sameeyay waxaana loo iibiyey si weyn. Ka mid ah xulashooyinkaas ayaa ka wanaagsan inay doortaan, waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaarto baahida dhabta ah. Sida caadiga ah, waxay leeyihiin dhererka gacanta iyo xajmiga xajmiga. Run, waxaa jira qalab leh labadaba labada dhinac iyo labada dhinacba. Iyada oo kaalmada dambe, waxaa suurtogal ah in laga saaro laamiyo aan loo baahnayn oo horeba ilaa 5 cm qaro;
Waa muhiim! Dhererka dadaalku wuxuu ku xiran yahay dhererka gacanta, sidaa darteed kharashka shaqada oo ka sii fiican wuxuu u fiicanyahay inuu haysto muddo dheer.
salmanada ratchet waa la isku halleyn karo si loo hubiyo in si tartiib tartiib ah u jarida nooc kasta oo laamo ah. Iyadoo leh dhowr fure oo isku xiga, marxalad aad u weyn oo ah jaridda jarista ayaa lagu gaaraa dadaalka ugu yar ee lagama maarmaanka ah ee jireed;
Qodobka sareeya, sida saldhiga jarjarista ee qaybta foosha lagu fududeeyo, ayaa si gaar ah loogu talagalay inay jarjaraan geedaha iyo dhirirka dheer. Saameynta waxaa bixiya ul (ama qalabka telescopic). Isla mar ahaantaana, dhererka loo baahan yahay ee xakamaynta waxaa lagu hagaajiyaa qaybo isku dhafan ama waxaa lagu gaaraa ulakac kale. Goobahaas waxaa sidoo kale la soo saaraa iyada oo la tixgelinayo suurtogalnimada isticmaalka gaaska ama korontada;
gaar ahaan nadiifinta nadiifinta sheyga ama shaybaarka, oo ay sameeyeen mindi gaar ah oo qallalan oo ku habboon xargaha shinbiraha, ayaa sidoo kale ku xiran taxadar gaar ah. Marka la eego jacaylka beeralayda si ay u gaaraan kala duwanaanshaha dhirta ay ku muujinayaan sifooyinkooda, waxaan si ammaan ah ugula talin karnaa siibtaankan aadka u wanaagsan, si weyn u yareeya waqtiga shaqada, isticmaalka joogtada ah.
Waxa aad raadineysid marka aad dooranaysid baashin beerta
Sidee, wax u baran kartaa noocyada kala duwan ee qalabka ganacsiga, si gaaban u doortaan xamaamyada beerta aad u baahan tahay? Si taas loo sameeyo, iyada oo aan degdeg ahayn, fiiro gaar ah u yeelo dhowr xaaladood oo muhiim ah.
Si loo go'aamiyo nooca (yada) shaqada ee loo isticmaali doono kala-saarayaasha.
Hubi in guga loogu talagalay garsooruhu uu ku xiran yahay awooda awooddaada si aad u isticmaasho raaxada. Si arrintan loo sameeyo, ka hor intaanay iibsanin waa lagama maarmaan inay ka fekeraan xeeladaha, isla markaasna hubi in ay ku haboon yihiin xajmiga calaacalaha iyo farahaaga iyo in qalabku yahay mid aad u culus (ama xubnaha qoyskaaga).
Waxaa lagugula talinayaa inaad heshid xakameyn la isticmaali karo labada gacanta midig iyo bidix.
Iska hubi caleemaha gabbashada ee daaweyn gaar ah si looga hortago in la jarjiro cabitaanka khudradda inta lagu jiro manjooyin.
Si loo bixiyo, maskaxda lagu hayo isticmaalka amniga iyo keydinta kaydka, in uu leeyahay xiro lagu xiro xirmooyinka.
Dhiqlayaasha xayawaanku weligood ma socdaan. Hubi in nooca aad doorato uu yahay ikhtiyaari ah inuu beddelayo - haddii kale, wakhti ka dambeeya (gaaban, haddii uu jiro shaqo badan), waxaad u baahan doontaa inaad raadsato fursado adag oo lagu xoqdo boogaha, ama iska tuur qalabka oo idil.
Badbaadada marka ay la shaqaynayaan waxay u maleynayaan in uu haysto awood xoog leh oo gacmaha ninkii beerta ka shaqeynayay oo aan ka cararin, abuuray raaxo la'aan iyo naxdin. U iibso xayawaan leh labada gacmo-gacmeed ama kuwa la daboolay silikoon.
Ha xadidin naftaada tilmaamaha badeecada oo ha ku tiirsaneyn qiimaha sare - ma aha damaanad lagu kalsoon yahay oo tayo sare leh. Ha illoobin fikradaha xirfadlayaasha iyo dadka aqoonta leh - waxay kaa caawin doonaan inaad si aad ah u isbarbardhigto qiimaha la soo bandhigay heerka farsamada ee shayga la iibsaday iyo awooddaada dhaqaale.
Natiijada ah in la tixgeliyo sheyga kor ku xusan ayaa hubaal noqon doonta jawaabtaada saxda ah ee su'aasha, taas oo xulafada ay yihiin kuwa ugu fiican.
Sidee loo ilaaliyaa ku habboonaanta xakamaynta: daryeelka saxda ah
Ma aha in qof kastaa awoodi karo inuu iibsado ciqaab caalami ah oo leh sifo heer sare ah oo suurtagal ah oo suurtogal ah in ay isticmaalaan wax soo saarka shaqada. Haa iyo maya, qalabkani waa lagama maarmaan inta badan kiisaska. Ma aha in la sheego xaqiiqda ah in haysashada sharikad laamaha ah ee beerta macnaheedu ma aha in garsoorka loo baahan yahay ubax. Sidaa daraadeed, adoo isticmaalaya sharuucda caadiga ah ama kuwa takhasuska leh, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho kalsoonida iyo mudnaanta illaa inta suuragal ah. Ma jiraan xeerar badan, waxayna yihiin:
manjooyin kudub ah oo laga sameeyay maaddooyin ku xiran saamaynta dhoobada waa in loo tirtiro qalalan ka dib codsigii;
saarista casiir khudradda dusha sare ee daboolka waxaa lagu sameeyaa ruux maskaxda ah, gaas ama qalabka kale ee laga helo asalka organic;
marka la dhameeyo nadiifinta dusha sare ee wareega, wareegga wareegga iyo ilaha dhirta, waxay ku daboolan yihiin lakab khafiif ah ee saliidda gawaarida (dhawr dhibcood ayaa ku filan tan) ama waxaa la mootiiyaa qalab gaar ah oo loogu talagalay qalabka beerta (lithol, dufan casri ah);
Wareegyada dabooli kara waxay u baahan yihiin in lagu nadiifiyo xaalad aan kala go 'lahayn;
qalabka aan la beddeli karin waa la cusbooneysiin karaa (haddii uu dhab ahaantii caatoobo), adoo isticmaalaya barkad saddex xagal ah ama faylka aleelka. Nidaamka soo socda ayaa laga codsadaa: dhinaca dhinaca geeska goynta, nadiifinta waxay bilaabmaysaa dhaqdhaqaaqyo isdhaafsi ah, ka dib, ka dib marka la riixo bararka dhinaca dambe ee guntooda, waxay ka saaraan cayayaanka soo baxay.
Waa muhiim! Maqashooyinka la bedeli karo oo aan la isticmaali karin waa in la beddelo iyada oo aan cusubeyn iyada oo aan la fekerin.
xilliga qaboobaha, marka qalabku aanu isticmaalaynin, waa in la keydiyaa, marka hore, qolka oo aan lahayn kala duwanaansho heerkul ah oo keenaya samaynta kondensate leh muuqaalka danbe ee miridhku; marka labaad, foomka u furan, si guga ma aha mid caadaystay in ay ku jiraan xaalad ciriiri ah oo markaas markaas awoodi karta in ay gebi ahaanba ogaadaan (guud ahaan waa ka fiican si ay u soo saarto guga la guursan karo muddo).
Qalabka beerta: sida loo beddelo shay kale
Wax soo saarka warshadaha casriga ah ee noocyada kala duwan iyo noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'secateurs' waa la horumariyay in su'aasha ah in lagu beddelo qalab kale, sida caadiga ah, ma soo baxaan. Waxyaabo kale ayaa ah haddii miisaanka shaqeyntu ay aad u yartahay in ay ku qaadato iibsigeeda maqnaanshaha kalsoonida. Xaaladdan, waxaad isticmaali kartaa qalabka kale ee jarista. Tusaale ahaan, bilawga shaybaarka ayaa si guul leh u bedeli doona mindiarka xaraaradda gaarka ah. Noocyada kala duwan ee mindiyaha, waxay kuxirantahay iftiinka, darnaanta iyo xoogga alaabta, waxaa loo isticmaali karaa jarida laamaha iyo caleemaha dhirta. Xaaladaha qaarkood, waxaa suurtagal ah in la isticmaalo maqnaashaha adag oo xooggan oo ujeeddo isku mid ah (labadaba guriga caadiga ah iyo maqasyo gaar ah, tusaale ahaan, jarida birta). Roots iyo gooyn waa la gooyn karaa boor leh ama fiiq adag oo qallafsan. Si aad uhesho koritaanka daaqsinka qaarkood, qashinka caadiga ah ee dhejiska ah ayaa ku haboon. Waxaad isticmaali kartaa sawir khafiif ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso in qaybta soo baxday aysan noqon nadiif ah sida aan jeclaan lahayn.
Shaqada beerta ee waqtiga dheeraa ayaa sii kordheysa la barbardhigay. Kordhinta, qalab gaar ah ayaa u muuqda in beerta beerta iyo beeraha beerta si loo dhaqaajiyo si dhakhso ah iyo tayo sare leh, taas oo keeneysa Bisaylkiisa hore iyo sare u qaadista sare. Kala-guurtada waxay qayb weyn ka qaadatay qalab beerta kala duwan, qaybtanna waa in aan la dayacin.